Thelọ oriri na ọ Resụ Bestụ kacha mma na Times Square | Akụkọ Njem
Na-aga New York ka ọ bụ nrọ gị ma ị nọ n'ụzọ iji nweta ya? Akwa! New York bụ obodo kachasị mma n'ụwa niile ọ bụ ezie na ọ nwere asọmpi na Asia echere m na na West ọ bụ na kasị mma.
Ndụ abalị nke New York dị mma ma nwee ọtụtụ ụlọ mmanya, ebe ihe nkiri, sinima, ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ shoppingụ soụ dị iche iche, yabụ na ịgaghị alakpu ụra ebe a. Iri nri bụ nnukwu anụrị ebe ọ bụla ị gara, ya mere Depụta ụfọdụ ụlọ nri kacha mma na Times square.
2 Lamlọ atụrụ atụrụ
3 Ubi oliv
5 Ellen's Stardust Nri abalị
Ọ bụ akụkụ nke New York a na-ekwo ekwo n'okporo ụzọ warawara n'okporo ámá na Midtown Manhattan: Isi seventh Avenue zutere Broadway Avenue. Obere mpaghara a nke New York nwere obere blọk ma ọ bụ njem ọ na-enweghị onye ọ bụla ga-atụfu.
Times Square akpọwo ya otu a kemgbe 1904, a na-akpọbu Longacre Square, ma akwụkwọ akụkọ ama ama The New York Times n’afọ ahụ ọ kwagara n’ime ụlọ ọhụrụ, Buildinglọ Owuwu. Otu ihe na - eduga na nke ọzọ, taa a na - akpọ ya Times Square.
Dee ebe iri nri ebe a:
Lamlọ atụrụ atụrụ
Ọ bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantsụ inụ dị n'obodo ahụ nwere mma kachasị mma n'ime, mara mma ma na-adọrọ adọrọ. Ogwe ahụ bụ ebe pụrụ iche na-eri nri oriri Augustine na-acha uhie uhie ma nwee ebe a na-ete limestone nke malitere na 20s.
Na-ahụ maka kichin nke a Restaurantlọ oriri na ọ Artụ Artụ ndị mara mmaMma onwere onye isi nri Geoffrey Zakarian na menu nwere nụchara anụcha dị ka foie gras, ukpa akpọkọtara atụrụ, pecan butter profiteroles, na ezigbo mmanya, niile na-esonyere jazz dị ndụ ma ị na-aga na abalị Wednesday ma ọ bụ na Sunday Sunday brunch.
N'ezie, ọ bụ otu n'ime ihe kachasị ọnụ. Nwere ike ịchọta ya na 132 West 44th, St.
Ọ bụrụ na ị na-ele anya eri na ezi echiche nke obodo na larịị n'okporo ámá, mgbe ahụ ebe a bụ nnukwu ebe. Ọ bụ n'ezie a yinye ụlọ oriri na ọ fromụ fromụ si Nri Italian, Yandị Yankee. Na Times Square enwere ngalaba nwere okpukpu atọ mara mma n'ụdị Tuscan.
Ọnụahịa dị ala, akụkụ buru ibu Achịcha na salads ahụ enweghị atụ nke mere na ọ magburu onwe ya maka ndị njem na-agụ agụụ.
Ọ na-anabata kaadị akwụmụgwọ ma na-emeghe site na Sọnde ruo Tọzdee site na 11 ruo 11 elekere na site na Fraịde ruo Satọdee site na 11 ruo etiti abalị. I nwere ike iri nri ebe ahụ ma ọ bụ zụta laa site na weebụsaịtị ị nwere ike idobe ndoputa. Ọ bụrụ n’ịga ngwụcha izu, ikekwe ịkwesịrị ime ya.
Ọ bụrụ na Olive Olive na-agba mbọ ijere nri Italiantali ebe a anyị nwere Nri Corean. BonChon bụ agbụ na otu narị ụlọ oriri na ọ restaurantsụ aroundụ gburugburu ụwa.
BonChon bụ ebe iri nku nku ọkụkọ, soy galik, kimchi, na ihe ọ bụla yiri ya, mana ọpụrụiche ụlọ ahụ bụ ọkụkọ: nku, ụkwụ, apata ụkwụ na ngwakọta, iji gbalịa ihe niile.
Ahịa? Dịka ọmụmaatụ, obere nku (nku 10) na-efu $ 11 mana ngwakọta (nku isii na apata ụkwụ atọ) na-efu $ 95. Mgbe ahụ, e nwere ọtụtụ nri ndị ọzọ, tteokbokki maka 3, takoyaki maka dollar 12, squid eghere eghe maka dollar 95, ofe udon maka 11 ma ọ bụ efere osikapa eghe maka dollar 95.
Chọta BonChon na 207 W 38th St. Ọ ga-emepe ụbọchị Mọnde ruo Wenesde site na 11:30 nke ụtụtụ ruo elekere 10:30 nke mgbede, Tọzdee mechiri elekere 11 nke ụtụtụ, Fraịde na elekere iri na abụọ nke ụtụtụ, Satọdee na 12 elekere ọzọ na Sọnde na 11:10 elekere.
Ellen's Stardust Nri abalị
Cannot nweghị ike ịhapụ New York na-enweghị na-aga site a kpochapụwo nri abalị ya mere, anyị nwere otu. Ọ bụ Slọ oriri na ọ .ụ themụ themed 50 na a ezi menu New York: sandwiches, hamburgers, pastrami, larịị.
Ma n'ofe nri ndị na-echere bụ ndị ị ga-ahụ n'ihi na ha na-egosi ihe ngosi mgbe ha na-enyefe iwu ahụ na songs bụ nnọọ kpochapụwo, ọ gaghị ekwe omume na ị na-amaghị ihe karịrị otu n'ihi na ha na-ada ụda rock na-ewu ewu na fim.
Ha na-abụ abụ na ogbo, pụọ ma gaa n'ihu na-ekesa efere. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe dị iche iche na rie ma kporie ndu n’otu oge nke a bụ saịtị. O doro anya na ọ bụghị nri kachasị mma mana maka nri iri nri unpretentious bụghị kwa ọjọọ.
Comida Mexico na ọtụtụ tacos na anya na ụfọdụ n'ime ndị kasị mma na obodo. Quesadillas na margaritas na-agbakwụnye na ndepụta a na Mexico bistro nke nwere tebụl ndị na-acha ọcha, tebụl Spanish na mgbidi, na ime ụlọ ezumike abụọ.
O nwere ebe ntaneti zuru oke zuru oke ebe ha na-ebiputa menu dika ubochi nke izu ka inwee ike ileta ya tupu igha. Ha na-emeghe maka nri ehihie, nri abalị na brunch na ngwụsị izu ọ na-amalite n’elekere 11:30 nke ụtụtụ wee gwụ n’elekere 3:30 nke abalị.
Ma ọ bụrụ na ihe na-amasị gị n'ezie, ị nwere ike ịkwụsị ụlọ ahịa ahụ tupu ị gaa ịzụta ụdị ihe oriri dị iche iche na chiiz a roara n'ọkụ maka dollar 5 na 35.
Anyị na-ekwu banyere kpochapụwo Italian, Korean, Mexico na American nri ma na anyị na-na-efu ụfọdụ ụfọdụ n'ihi ya, ọ bụ n'aka nke nri ndị China. Ebe mara mma ịnụ ụtọ ya bụ Hakkasan, ngalaba nke ụlọ oriri na ọ Londonụ Londonụ London nke nwere mmadụ isii ndị ọzọ gburugburu ụwa.
Nri bụ Cantonese ọ bụkwa mbụ Chinese ụlọ oriri na ọ toụ Chineseụ nwere Michelin ọnọdụ. O doro anya, Ọ bụghị ihe dị ọnụ ala mana ị ga-eri kọlọọkụ a roara n'ọkụ kachasị mma na champeen ihendori na mmanụ a Chineseụ ndị China, dịka ọmụmaatụ. Ma ochicho mma mara nma.
Ọ bụ ebe dị oke ọnụ na-ewe obere akụkụ. Ọ bụrụ na ị ka ga, na ị ga-aga nwee obi ụtọ, gbaa mbọ rịọ maka inyoghi inyoghi ego n'ihi na ọ bụ ihe kacha mma iji mara ụlọ nri a. Ọ dị na 311 West 43rd Street.
Anyị na-esi na ihe dị oke ọnụ gaa na ihe dị ọnụ ala. Na ebe a na-akpọ Theater District bụ saịtị a na-eje ozi nnukwu burgers na nza nke fries ma kama portobello burgers na chiiz na eyịm, maka ndị anaghị eri anụ. Beer, mmanya na mmanya dị nro mezue a Mfe, ọnụ ala ma baa ụba menu.
Ihe niile malitere site na ụgbọ nkịta na-ekpo ọkụ na Madison Square Park, laghachi na 2004, mana na Times Square ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nke dị na 691 8th Avenue, n'akụkụ ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke ụzọ ahụ na n'okporo ámá 44th.
Nọgide na-enye ndị na-azụ anụ, mmanya, biya, na nkịta na-ekpo ọkụ ma mepee ụbọchị asaa n’izu bido n’abalị iri na otu nke ụtụtụ ruo etiti abalị.
A Pizza na nyc? Ma eleghị anya, ọ dị ka kpochapụwo dị ka nkịta na-ekpo ọkụ na nkuku ma ọ bụ iri nri hamburger na nri abalị. Lee ị nwere ike ịnwale ya na Don Antonio, na neapolitan style.
Enwere ọtụtụ ụdị Pizza A na-ekwukwa na arụrụ ụlọ mozzarella na burrata nke ha na-eme ebe a, arụrụ n'ụlọ, bụ ụfọdụ n'ime ihe kacha mma na New York. I nwekwara ike iri salads, croquettes na doro anya, pasta.
Ruo ugbu a ụfọdụ n'ime ụlọ nri kacha mma na Times Square, mana n'ezie ọ bụghị naanị ha. Dika inwere ike iri nri site n’uwa nile, nke bu eziokwu bu na ndepụta a enweghi ngwụcha n’ihi nhọrọ ọ bụla (pizzas, pastas, sushi, Mexico, Spanish, Russian and a longet etcetera), enwere ọtụtụ ihe atụ.
Ọ dabere na ịchọrọ ịnọ ọdụ n'ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ na ịchọrọ iri n'okporo ámá, na otu n'ime ọtụtụ ụgbọ ala ndị dị na mpaghara New York na nke na-emekwa ka nri ghọọ ebe ndị njem nleta, mana ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ oriri na ọ thenụ thenụ mgbe ahụ, echere m na otu n'ime ndị a m depụtara bụ ndị kasị ewu ewu. Echefula ha!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Restaurantslọ oriri na ọ bestụ bestụ kacha mma na Times Square
Ezi ụtụtụ, aga m abata n'obodo maka Afọ Ọhụrụ ma chọọ iri nri abalị na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-enye m ohere ịhụ bọl na-ada na 00:00 na 1/1/2013. A ga-emechi Planet Hollywod. Kedu ihe ị kwadoro? Daalụ!